Job 28 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
28 “N’ezie, ọlaọcha nwere ebe a na-enweta ya,Ọlaedo a na-anụcha anụcha+ nwekwara ebe a na-enweta ya; 2 Ọ bụ n’ala ka a na-egwute ígwè,+Ọ bụkwa na nkume ka e si agbazepụta ọla kọpa. 3 Mmadụ emewo ka a ghara inwekwa ọchịchịrị;Ọ na-achọkwa nkume ruo na nsọtụ niile nke ala,+N’itiri nakwa n’oké ọchịchịrị. 4 O gwunyewo okporo ígwè n’ebe dị anya n’ebe ndị mmadụ bi,+N’ebe e chefuru echefu nke ụkwụ na-adịghị eru;Ụfọdụ n’ime ụmụ mmadụ na-eji ụdọ rịba n’ime ala, ha ana-akwụfegharị. 5 Ọ bụ n’ala ka ihe oriri si apụta;+Ma n’okpuru ya, e kpuru ya ihu dị ka ihe ọkụ bibiri. 6 Nkume safaya dị n’ebe nkume ya juru,+O nwekwara aghịrịgha ọlaedo. 7 Ọ bụ ụzọ nke nnụnụ ọ bụla na-eri anụ+ na-amaghị,Anya égbé ojii+ adịghịkwa ahụ ya. 8 Anụ ọhịa ndị dị ebube azọtụbeghị ụkwụ na ya;Nwa ọdụm agafetụbeghịkwa n’elu ya. 9 N’elu nkume siri ike ka ọ tụkwasịworo aka ya;Ọ na-akwatu ugwu malite na ntọala ya; 10 Ọ na-awa ọwa mmiri banye n’oké nkume;+Anya ya ahụwokwa ihe niile dị oké ọnụ ahịa. 11 Ọ sụchiwokwa ebe osimiri si asọpụta,+Ọ na-agbakwa ihe zoro ezo n’anwụ. 12 Ma, amamihe—olee ebe a pụrụ ịchọta ya,+Oleekwanụ ebe nghọta dị? 13 Mmadụ efu amabeghị ọnụ ahịa ya,+A dịghịkwa ahụ ya n’ala ndị dị ndụ. 14 Ogbu mmiri asịwo,‘Ọ dịghị n’ime m!’Oké osimiri asịwokwa, ‘Ọ dịghị n’ebe m nọ!’+ 15 A pụghị iji ezi ọlaedo gbanweta ya,+A pụghịkwa ịtụ ọlaọcha atụ̀ ka ọ bụrụ ọnụ ahịa ya. 16 A pụghị iji ọlaedo Ofa,+Ma ọ bụ nkume oniks dị ụkọ, ya na safaya, kwụọ ụgwọ ya. 17 A pụghị iji ọlaedo na enyo tụnyere ya,A pụghịkwa iji arịa ọ bụla e ji ọlaedo a nụchara anụcha mee gbanweta ya. 18 A gaghị ekwutedị okwu nkume kọral+ na nkume kristal,Ma akpa nke jupụtara n’amamihe dị oké ọnụ ahịa karịa nke jupụtara na nkume pel.+ 19 A pụghị iji nkume topaz+ si Kush tụnyere ya;A pụghịkwa iji ọbụna ezi ọlaedo kwụọ ụgwọ ya. 20 Ma amamihe—olee ebe o si abịa,+Oleekwanụ ebe nghọta dị? 21 E zopụwo ya ọbụna n’anya onye ọ bụla dị ndụ,+E zochiwokwara ya anụ ufe nke eluigwe. 22 Mbibi na ọnwụ asịwo,‘Anyị ji ntị anyị nụ akụkọ banyere ya.’ 23 Ọ bụ Chineke ghọtara ụzọ ya,+Ọ bụkwa ya onwe ya maara ebe ọ dị, 24 N’ihi na anya ya na-eru na nsọtụ ụwa;+Ọ na-ahụkwa okpuru eluigwe dum, 25 Iji mee ka ifufe dị arọ,+Ya onwe ya atụwokwa mmiri n’ihe ọ̀tụ̀tụ̀;+ 26 Mgbe ọ tụụrụ mmiri ozuzo ụkpụrụ,+Meekwara oké mmiri ozuzo na égbè eluigwe ụzọ, 27 Ọ bụ mgbe ahụ ka ọ hụrụ amamihe wee kọọ banyere ya;Ọ kwadebere ya ma nyochaa ya nke ọma. 28 O wee sị mmadụ,‘Lee! Ịtụ egwu Jehova—ọ bụ ya bụ amamihe,+Mmadụ isi n’ihe ọjọọ wezụga onwe ya bụkwa nghọta.’”+